musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Russell Wilson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wedu Russell Wilson anokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Harrison Benjamin Wilson III naTammy Wilson - née Turner). Mukadzi wake (Ciara Princess) uye Mwanasikana (Sienna Princess).
Pamusoro pezvo, memoir yedu inotaura nezveHama yemumhanyi (Harrison IV), Sista (Anna), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro, uye mambure akakosha.
Kuita kuti nyaya refu ive pfupi, tinoisa pamberi pako mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaRussell Wilson, mutambi wenhabvu wekuAmerica weSeattle Seahawks weNational Soccer League (NFL).
Kunyora kwedu kunotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika mukurumbira wake. Kuti uwedzere kufarira kwako Biography, isu tinopa nzira yegalari yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaRussell Wilson.
Chokwadi, iyo pikicha yaunoona inotevera inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi.
Russell Wilson's Biography - Kubva paMazuva Ehudiki hwake kusvika kuNguva yeMukurumbira.
Ehe, isu tinomuziva kuve wechitatu quarterback munhoroondo yeNFL kukanda makumi matatu touchdowns mumwaka mina yakateedzana.
Kunyangwe kurudziro yake, isu tinoziva kuti vashoma chete ndivo vakaverenga chidimbu cheRussell Wilson's Childhood Nyaya uye Biography.
Naizvozvo, tinokuunzirai nyaya inonakidza yaRussell Wilson uye kuparara kwebasa rake remumhanyi. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Russell Wilson Childhood Nyaya:
Kutanga, Russell Carrington Wilson akazvarwa musi we29th waNovember 1988. Akasvika panyika neChipiri chakajeka kuna Tammy Wilson (née Turner) naHarrison Benjamin Wilson III.
Mbiri yedu yeAmerica yakazvarwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweUS State yeOhio, inozivikanwa seCincinnati.
Zvekare, Russell Wilson akazvarwa sewechipiri pavaviri (2) vamwe vanun'una. Nepo mukoma wake ari Harrison IV, hanzvadzi yake ndiAnna Wilson.
Iye nevanin'ina vake vanobva kumubatanidzwa wababa vavo, Harrison Benjamin Wilson III naamai, Tammy Wilson (née Turner), vane mafoto atinoratidza pazasi.
Tarisai Russell Wilson Vabereki - amai, Tammy Wilson (née Turner) uye baba, Harrison Benjamin Wilson III.
Russell Carrington Wilson akakurira mumhuri yepedyo muRichmond, Virginia, naHarrison Wilson III, mukoma wake Harry, uye munun'una wake, Anna.
Russell akatanga kutamba nhabvu aine makore mana, pamwe chete nababa vake nehanzvadzi yake. Akapedza nguva yega yega aigona kutamba mitambo, kunyanya basketball, pamwe nemukoma wake mukuru. Kuva mudzidzi anokurumidza, Russell akatanga kutamba nekukurumidza.
Mufananidzo wehudiki waRussell Wilson.
Kuve nemukoma mukuru kwakabatsira kuisa makwikwi muWilson. Mukoma wake mukuru, Harry, aisangomurega achikunda mumitambo yavo.
Kukwikwidza kwavo kwakamugonesa kuti ave akaoma. Wilson akakudza hunyanzvi hwake hwekumhanya kuburikidza nemakwikwi nemukoma wake mukuru, Harry.
Haasi mukoma wake chete akabatsira kuumba basa rake. Baba vaWilson vaive nekwavo yemitambo, vange vakadzidzira neSan Diego Charger.
Kuve nemukoma mukuru kwakabatsira kuisa makwikwi muWilson.
Russell Wilson Nhoroondo Yemhuri:
Isu tinogona kutsanangura kurerwa kwaRussell Wilson seboka repakati. Amai vake vaishanda semukoti wezvemitemo. Zvichakadaro, baba vake vaishanda segweta rakadzidza kwazvo.
Zvakare, Wilson nevanin'ina vake vakadzidza chaizvo. Vese vaipinda zvikoro zveprivate. Saka, vakafarikanya kugadzikana mune zvemari.
Russell Wilson Mhuri Mavambo:
The athletic Chap ndeyemarudzi akasiyana. Iye ane zvese zveAfrican-American pamwe neNative American nhaka. Saizvozvo, madzitateguru ake zvakare iEuropean Asia. Rudzi rwaRussian rweEurope rwakateedzerwa kubva muna 524 AD kusvika kuna Saint Arnold weMetz kuburikidza naCharlemagne.
Maererano nekuongorora genetic, Wilson i62% yemuAfrica, 36% yeEurope, 1% West Asia, uye 1% Central Asia. Sekuru vake-sekuru-vaimbova muranda weConfederate colonel. Zvisinei, akasununguka mushure meAmerican Civil War.
Kunyange zvakadaro, akaberekerwa muguta rechitatu pakukura muOhio, inozivikanwa seCincinnati. Dhorobha rine mazita emadunhurirwa akawanda. Mamwe mazita ayo anosanganisira Cincy, Nati, The Queen City, The Blue Chip Guta, Mambokadzi wekuMadokero uye Guta reMakomo manomwe.
Vagari veCincinnati vanotaura mumutauro weGeneral American. Naizvozvo, Russell Wilson muAmerica asi wedzinza rakasanganiswa. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaRussell Wilson.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaRussell Wilson.
Russell Wilson Dzidzo:
Nyeredzi yeNFL yakapinda Chikoro cheCollegiate muRichmond, Virginia. Ari ikoko, akashanda semutungamiri wekirasi. Akazotora chikamu senhengo yezvose zviri zviviri basketball uye baseball zvikwata.
Wilson akaridza mutambo wake wekutanga wakarongeka weTuckahoe Tomahawks timu yenhabvu yevechidiki mugiredhi rechitanhatu. Kunyangwe zvake aive nehasha uye akatsiga, airatidza hutungamiriri pakati pevezera rake.
Russell Wilson Dzidzo - Iyo NFL Star yakapinda Chikoro cheCollegiate muRichmond, Virginia.
Semudiki muna 2005, Russell akakanda mayadhi e3,287 uye makumi mana ekubata. Iyo Champ yakamhanyirawo 40 mayadhi uye gumi neshanu touchdowns. Akabuda seye-dunhu rese, dunhu rese, uye wese-nyika mutambi.
Chikoro chesekondari chaWilson chakatemwa pikicha nevaaitamba navo.
Wilson akabuda kaviri ari Richmond Times-Dispatch Player yeGore. Nguva pfupi apedza chikoro chesekondari, akaenderera kuNorth Carolina State University, achipedzisa baccalaureate yake mukutaurirana.
Achiratidzika kunge asina kugutsikana nazvo, Wilson akapfuurira kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison. Akawana dhigirii rake reMasters in Educational Leadership uye Policy Analysis.
Iyo NFL Star, akatamira kuNorth Carolina State University, achipedzisa baccalaureate yake mukutaurirana.
Russell Wilson Ekutanga Basa:
Cincinnati chizvarwa akaenderera mberi nebasa rake renhabvu kuburikidza nekoreji. Nekudaro, baseball yakaramba iri imwe yezvaaida. Iye, pamusoro pezvo, akatamba diki ligi baseball yeTri-Guta Dust Devils mu2010.
Pamusoro pezvo, akaridzira Asheville Vashanyi mu2011 sechipiri basman. Paaive kuNorth Carolina State University, akawana All-ACC yekutanga-timu kukudzwa. Ndiye aive wekutanga kuita rekodhi.
KuNorth Carolina State University, akawana All-ACC yekutanga-timu kukudzwa.
Mushure mekunge Wilson atamira kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison, akatanga kutambira maBadgers. Seattle Seahawks munguva pfupi yakamuona.
Mugore rake rekupedzisira rekoreji, akatyora zvakare rekodhi yeNCAA yekupasa zvakanaka. Akabatana neSeahawks muna 2012. Akabva atyora zvinyorwa zvakawanda zveNFL.
Russell Wilson Biography - Rwendo rweMukurumbira Nyaya:
Iyo Seahawk QB yaive neyakabudirira yekutanga mwaka. Akasunga rekodhi yaPeyton Manning yapfuura yekupfuura touchdowns nerookie (26).
Saka, akabuda sePepsi NFL Rookie yeGore. Russell Wilson akahwina Super Bowl XLVIII pamusoro peDenver Broncos.
Wilson akave wechipiri mutema, kutanga QB mushure meDoug Williams kuhwina Super Bowl nekukunda. Wilson akabva awana masere Pro Bowls. Akaratidza mune maviri Super Bowls.
Uyezve, akave zvakare mupfupi quarterback kuhwina Super Bowl. Aive mupfupi kupfuura Len Dawson, Joe Theismann, naDrew Brees (ese 6'0 ″).
Russell Wilson Biography- Kumuka Mukurumbira:
Seahawk QB inobata rekodhi yekukunda kwakanyanya neNFL quarterback kuburikidza nemwaka mipfumbamwe (98). Russell ndomumwe wevana quarterbacks munhoroondo yeNFL ane basa rakapfuura repamusoro pe100.
Muna 2019, Wilson akasaina chibvumirano chemakore mana neSeahawks. Akabuda semutambi anobhadharwa zvakanyanya-weNFL. Muna 2020, Wilson akabatana nezvinodiwa zve Travis Kelce kubuda seNational Soccer League (NFL) Man of Year nominee.
Pamusoro pezvo, akave wechitatu quarterback munhoroondo yeNFL kukanda Makumi matatu touchdowns mumwaka mina yakateedzana. Ona zvakanakisa zvebasa rake pano.
Sezvineiwo, muna Gumiguru 2021, Wilson akaona kupotsa kwake kwekutanga muhupenyu hwake hwese.
Vakamutonga kunze kwemutambo wePittsburgh Steelers nekuda kwekutyoka kwemunwe kukuvara. Tine clip inotsanangura kuti kukuvara kunogona kukanganisa sei basa rake pano.
Wilson akatanga kutamba baseball baseball mushure mekunyorwa neColorado Rockies mumutambo wechina (140th pick general) ye2010, MLB dhizaini pazuva re8th raJune 2010.
Zhizha iroro, Russell akatamba mitambo makumi matatu nembiri semutevedzeri wechipiri weTri-City Dust Devils, Rockies 'Class A Short Season affiliate. Akapedza aine maviri epamba anomhanya, 32 maRBI, uye mazana matatu ekubheta.
Russell Wilson Nhoroondo Yehukama:
Nyeredzi yeNFL yakaroora kaviri. Akasangana naAshton Meem kuchikoro chesekondari, uye vakaroorana muna 2012.
Zvakadaro, vaviri vacho vakaparadzana makore maviri gare gare. Russell akabva atanga kufambidzana nemuimbi wekuAmerica weR&B Ciara muna 2015.
Ivo vaviri vakaroora gore rinotevera kuPeckforton Castle muCheshire, England. Uyezve, Russell Wilson naCiara Vanoita Vakakwana Vakaroorana. Pasina nguva vakabva vazivisa nhumbu yavo yechipiri.
Russell akabva atanga kufambidzana nemuimbi wekuAmerica weR&B Ciara muna 2015.
Ciara akatumira vhidhiyo inoratidza murume kana mukadzi pasocial media muna Kubvumbi, achizivisa kuti vaitarisira mukomana.
Mwanakomana wavo Win Harrison Wilson akaberekwa pazuva re23rd raChikunguru. Pamwe chete naCiara, Russell akambundira mwanakomana wake Future Zahir Wilburn asina pfungwa mbiri.
Pop diva akataura kuti Wilson anga ari baba vanoshamisa kubva pazuva rekutanga. Russell naCiara vanewo imbwa nhatu dzinonzi Prince, Naomi, uye Hero. Imbwa idzi chikamu chemhuri yavo.
Wilson ari mukushushikana nerudo rwehupenyu hwake, Ciara.
Mudzimai waRussell Wilson - Ciara Princess Wilson:
Ciara Princess Wilson, née Harris, muimbi weAmerica, munyori wenziyo, modhi uye bhizinesi mukadzi. Akazvarwa muFort Hood, Texas, mhuri yake yakazogara muAtlanta, Georgia, ichijoinha boka revasikana Hearsay.
Iye aive akazvarwa paFort Hood Mauto Base muKilleen, Texas, pazuva re25th yaGumiguru 1985. Ciara ndiye chete mwanasikana nemwana waJackie naCarlton Clay Harris. Akakurira muuto rehondo Germany, Utah, New York, California, Arizona, uye Nevada.
Ciara ndiye ega mwanasikana uye mwana waJackie naCarlton Clay Harris.
Akave akatumidzwa zita rehunhu hweRevlon Ciara, yakaunzwa muna 1973 uye ichiri kutengeswa nanhasi. Munguva yehudiki hwake, Ciara nemhuri yake vakagara muAtlanta, Georgia. Mu2019, Ciara akapinda Harvard Bhizinesi Chikoro.
Akapedza chirongwa chemazuva mana cheBusiness of Entertainment, Media uye Sports. Ciara, pamwe chete nemurume wake, muridzi wevaraidzo yeTV, kushambadzira, uye kambani inogadzira mafirimu Nei Kwete Iwe Zvigadzirwa, zvakabatana neAmazon Prime Vhidhiyo kubvira 2021.
Zvimwe nezveVana vaRussell Wilson:
Russell ndibaba vane rudo kuvana vavo vatatu. Vezvenhau vanowanzoona mhuri ichifarira baba vavo QB panhandare uye vachipemberera pamwechete. Russell Wilson, zvisinei, anoti iye Anoda Vana Vakawanda, asi Ciara haabvumirani nazvo.
Russell Wilson ane vana vatatu nemukadzi wake, muimbi uye modhi Ciara. Vana vaWilson, Sienna Princess naWin Harrison Wilson vakazvarwa muna 2017 na2020, zvichiteerana. Uyezve, Russell anewo mwanakomana, Future Zahir Jr., kubva kuhukama hwaCiara munguva yakapfuura.
Mufananidzo wemhuri wakanaka waRussell, mudzimai wake, Ciara nevana vavo.
Nezve Russell Wilson Vana - Ramangwana Zahir Wilburn:
Pazuva re19th raMay 2014, Future akaberekerwa Ciara panguva yehukama hwake neAmerican rapper Future. Nekudaro, hukama hwavo hwemakore maviri hwakashanduka hwakashata mushure mekuzvarwa kwemwanakomana wavo, Future Zahir.
Mushure mekurambana, Ciara akawana chengetedzo yakazara yemwanakomana wavo. Paakatanga kufambidzana naRussell Wilson mu2016, akabva afarira Future Zahir uye ndibaba vokurera vane rudo.
Anogoverana chisungo chepedyo pamwe chete nevakoma nevanin'ina. Future Jr. anogovera chitarisiko chakanaka chevabereki vake uye ane mhando dzembatya dzevana.
Mwana wekurera waRussell, Future Zahir Wilburn.
Nezve Russell Wilson Vana - Sienna Princess Wilson:
Mwanasikana waRussell, Sienna Princess Wilson, akazvarwa pazuva rechimakumi maviri nemasere raKubvumbi 28, gore mushure mekuroora kwake Ciara.
Pamakore matatu, Sienna akatoratidza muBeauty Marks, vhidhiyo yenziyo yaamai vake muna 2019. Moreso, The Disney Holiday Singalong muna 2020.
Mwanasikana waRussell, Sienna Princess Wilson, akawana fyakatorwa muvhidhiyo yenziyo yaCiara's Beauty Marks.
Nezve Russell Wilson Vana - Win Harrison Wilson:
Win Harrison Wilson mwana mudiki waRussell, akazvarwa musi wa23 Chikunguru 2020. Ciara naWilson vakazivisa nhau dzinofadza kuruzhinji kuburikidza nesocial media.
Isu tinowanzo kuona maWilsons emitambo anoenderana zvipfeko uye kupemberera mitambo pamwe chete semhuri inofara.
Win Harrison Wilson ndiye gotwe raRussell.
Russell Wilson Hupenyu Hwemhuri:
Imba yemunhu ine basa guru kuhupenyu hwekukunda hwemunhu.
Vabereki vaRussell Wilson vakaita zvakawanda kuti vape zvakanakisa kumhuri yavo. Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yeimba yaRussell Wilson.
Mufananidzo wemhuri wekutanga weWilsons, unoratidza vabereki nevana vavo.
Nezve Baba vaRussell Wilson - Harrison Benjamin Wilson III:
Kunyangwe akazosarudza basa remutemo, baba vaWilson, Harrison Benjamin Wilson III, aimbova tarisiro yeNFL.
Akatamba nhabvu uye baseball kuDartmouth. Harrison akatotamba semugamuchiri akakura nemaChaja eSan Diego panguva yepreseason ye1980.
Harrison ndiye anoita basa raWilson uye kuzvibata. Iye ari pakati pezvinonyanya kukosha muhupenyu hwaWilson. Semwana, aigara achigadzirira vanakomana vake zvemitambo uye kuti vangataura sei nezvemitambo sevatambi vehunyanzvi.
Harrison Benjamin Wilson III akatamba nhabvu uye baseball yeDartmouth.
Russell nemukoma wake Harry vaitofanira kudzidzira zvavaizotaura kana rimwe zuva vakahwina Super Bowl. Harrison aigara achiudza vakomana kana paine chero mhando yemamiriro ebhizinesi, pfekai sutu netayi.
Fungidzira ndosaka Russell achiomerera nezvekugeza uye kugadzirwa zvakanaka mushure memutambo pamberi pemusangano wake nevatori venhau. Baba vaRussell vakafanana navo zvinoshamisa.
Nehurombo, Akafa muna 2010 aine makumi mashanu nekuda kwekunetsekana neDiabetes. Kunyange zvazvo Harrison asisipo, tinofunga kuti akaita basa guru kurera vana vake vatatu.
Harrison haasisipo, tinofunga kuti akaita basa rakakura kurera vana vake vatatu.
Nezve Amai vaRussell Wilson - Tammy Wilson (née Turner):
Amai vaRussell, Tammy Wilson, ndiye quintessential amai chero munhu anogona kuva navo. Wilson akafarira hunhu hwake hwekuzvipira pamusoro pemakore. Hapana mubvunzo kuti Russell anoda amai vake zvakadii. Tammy, kufanana naamai vakawanda, anodada nemwanakomana wake.
Anoshuma kuti aigara achiziva kuti achaita chimwe chinhu chikuru. Zvisinei, apo Russell airaramira mitambo, Tammy akava nechokwadi chokuti aitora zvidzidzo zvake zvakakomba.
Aiva tsigiro yemasvomhu nesainzi. Zvichakadaro, murume wake, Harrison, ndiye aitsigira Chirungu/munhoroondo.
Tammy Wilson zvakare anodzosera kunzanga yake. Akashanda zvinobudirira seyepamutemo mukoti chipangamazano. Munguva yedenda ra2020, Akazvipira kuvaka zvipatara zvinotakurika muSeattle.
Amai vaRussell, Tammy Wilson, ndiye quintessential amai chero munhu anogona kuva navo.
Nezve Russell Wilson Siblings:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Russell Wilson ane vaviri (2) hama. Ane hama, Harrison IV, uye hanzvadzi inonzi Anna. Ivo vanun'una vanogovana chisungo chepedyo uye nhoroondo. Kunze kwezvo, ivo vese vaipinda zvikoro zvakafanana zvakazvimiririra.
Mukoma waRussell akatambawo nhabvu uye basketball kuYunivhesiti yeRichmond. Ipo hanzvadzi yake, Anna Wilson, achitamba basketball kuStanford.
Nezve Russell Wilson Hama:
Mutambi weNFL weAmerica anofanira kunge aine dzimwe hama. Russell Wilson ane vashoma vemhuri vakakura parutivi kubva kuvabereki vake nevanin'ina, vakaita sababamunini, vanamainini, nasekuru nasekuru. Kunyangwe ipapo, isu tinofanirwa kunzwisisa zvakawanda nezvavo.
Kunyange zvakadaro, tinoziva zvishoma zvacho. Sekuru vababa vaWilson ndiHarrison B. Wilson Jr.
Aimbova mutungamiri weNorfolk State University. Harrison B. Wilson Jr akanga ari mutambi wemitambo miviri. Akatamba nhabvu uye basketball kuKentucky State University.
Saizvozvowo, ambuya vake baba, Anna W. Wilson, vakanga vari pachikoro cheJackson State University. Zvakare, sekuru vaamai vaWilson, AB Jackson, aive mupendi anozivikanwa. Chekupedzisira, ave padyo nemukadzi wemwene wake.
Russell nemuroora wake nguva refu yapfuura.
Iyo seahawk Quarterback inoratidzika semwana muhombe, handizvo here? Isu tinofungidzira kuti chikamu chemafuta emuviri chinogona kudzika zvishoma, zvakadaro. Zvaari mutambi ane mukurumbira, Russell anotarisira muviri wake mune zvorudzidziso. Russell ane pro chef, mudzidzisi wega, uye mudzidzisi wezvokudya kuti agare akasimba.
Wilson anodya anenge 4800 macalorie pazuva uye anonwa mvura yakawanda. Iye anotevera guteni-isina, isina-mukaka chikafu chine mapfumbamwe kudya pazuva. Russell, nekuwedzera, anodzivirira chikafu chisina kudya, anofarira organic, chikafu chinovaka muviri uye anotevera maitiro ekurovedza muviri, pamwe neyoga.
Hutano hwepfungwa hunotsanangura kuita kwemutambi. Naizvozvo, Russell ane murairidzi wepfungwa anomubatsira kukwenenzvera pfungwa dzake.
Uyezve, Wilson akatsanangura kuti akanga achibhururuka helicopters, chido chaave achitsvaga kubvira 2016. anoita izvozvo kuti abvise pfungwa dzake. Tarisa uone chikamu cheimwe yeanobhururuka sprees pano.
Zvimwe zvinofarirwa zvinosanganisira Mhuka, Baseball, Basketball neBeche. Zvakare Russell anoda kufamba uye kuona movіеs. Handiti vanomuda.
Naizvozvo, Wilson anoshandisa nzira yake yechokwadi yekuchengeta hukama navo. Yake Instagram account chete ine vateveri vanopfuura mamirioni mashanu.
Russell anopa maonero ake echokwadi nezvemitambo, varaidzo mune yake podcast DangerTalk, yaanobata pamwe nemutambi Jeff Dye. Iyo Dangertalk's2020 yakatevedzana inogadzirwa neESPN muvhidhiyo fomati uye inogona kunge iri paYouTube.
Russell nomudzimai wake, Ciara, vari parwendo rwezororo.
Nyeredzi yeNFL mutambi anoshamisa. Nzira yebasa yaRussell mutambo unobhadhara zvakanyanya. Wilson akawana yechipiri-yakakura kondirakiti muna 2015.
Zvekare, Russell ari wechitanhatu maererano neNFL QB mazinga, ane Patrick Mahomes vachiri kutungamira domain.
Naizvozvo, akabuda semubhadharo wepamusoro-soro muNFL nhoroondo panguva iyoyo. Panguva ino, anogona kuwana chero hupfumi hwaanoshuva.
QB yakatenga imba ye $ 6.7 mamiriyoni muna 2015. Imba yake yekugara inoyevedza iimba yemakamuri manomwe munzvimbo yeMeydenbauer Bay. Saka nekudaro, Wilson anogara imomo nemukadzi wake Ciara nevana.
Russell Wilson House - Maonero epamberi peimba yake yemamiriyoni mazana matanhatu emadhora.
Russell Wilson Mota Kuunganidzwa:
Nyeredzi QB mumhanyi anodawo mota neumbozha hwadzo. Kuda kwake G ngoro hakunetse.
Kunyangwe semaonero edu, ndiyo imwe yemota dzakanakisa kuva nadzo. Yake customized Mercedes Benz G-Kirasi inenge $135,000.
Saizvozvo, Wilson akatenga Matching G-Wagon yeMwanakomana waCiara! ona collage yemota dzake pazasi.
Motokari ine anti-kuba inishuwarenzi uye inonzwika inzwi system. Dzimwe mota dzaaive nadzo dzinosanganisira Audi, Range Rover neTesla.
Rudo rwaRussell kuG-wagon haruzununguki; wakaona here G-Wagon inoenderana yeMwanakomana waCiara?
Muna 2019, quarterback yakasaina kondirakiti neSeattle Seahawks iyo inomupa muhoro wakakura wepagore wemadhora makumi matatu nemashanu emamiriyoni.
Kuverenga kwedu kunoreva kuti anotambira $3,995 paawa! We have crunched the numbers.
Zvinoenderana necotb net inokosha, Russell Wilson akaunganidza mari yakazara emadhora zana nemakumi masere nemashanu. Zvese mune zvese, ane avhareji yemuhoro wepagore we $125.
Bhizinesi mabhizinesi uye zvibvumirano:
Pazuva rechi26 raKubvumbi 2012, Wilson akazivisa kuti akanga asarudza French/West/Vaughan yehukama hwake neveruzhinji, kushambadzira, uye kutsigira agency.
Kubva paakabuda seyekutanga quarterback yeSeahawks mu2012, akaonekwa mune zviziviso.
Russell ane ads yeLevi's American Family Insurance, Pepsi, Nike, Alasas theka Airlines, Microsoft, Duracell, Braun, Bose, United Way, uye Larson Automotive Group. Zvakare, muna Ndira 2020, Russell Wilson akatumidzwa sachigaro weNFL FLAG.
Zvakadaro zvakare, NFL nyeredzi Wilson akaita mari muhigh-tech ngowani inogadzira Vicis. Iyo yese mari ndeye $ 50M.
Uyezve, akashanda nemasangano enhabvu anomira akasiyana muBrazil, China, Canada neUK kubatsira kuparadzira ruzivo rwemutambo uyu.
Russell Wilson Untold Chokwadi:
Parizvino, Wilson akawana nzvimbo seimwe yepamusoro-soro yeSeahawks. Anofanira kuchengetedza chinzvimbo chake pakati pepamusoro maQB muNFL.
Zvisinei, kukuvara kwake, mushumo unazvo izvozvo Wilson ndiye kuita fambiro mberi mukunaya kwake.
Chii chimwe? Pazasi pane mashoma anonakidza zvimwe chokwadi nezveAmerican nhabvu quarterbacks.
Pasina kupokana, iye ane nzvimbo seimwe yemakota epamusoro eSeahawks.
Chokwadi # 1: Kiridzi Kuva Kwazvo:
Wilson zvakare chikamu-muridzi weSeattle Sounders yeMajor League Soccer (MLS) kunze kwenhabvu. Naizvozvo, ane mukombe weMLS Cup kuchikwereti chake, nekirabhu inohwina zita iri muna 2019.
Wilson anozvipira munharaunda yeSeattle. Munguva yeNFL mwaka, Wilson anoshanya pamazuva ake ekuenda kuSeattle Vana Hospital. Muna 2013 na2014, akabatana naRussel Investments pachirongwa chayo che "Invested with Russell".
Iyo kambani yakapa madhora zviuru zvitatu kune hwaro hwehupo hwaWilson pakubata kwese kwaakaita.
Wilson anoitisa mutambo wegore negore wegorofu uye mutyairi weNASCAR Kasey Kahne kutsigira masangano akasiyana, kusanganisira Seattle Vana Hospital.
Muna 2016, Wilsons 'Why Not You Foundation yakapa cheki yemadhora zviuru zana nemakumi matanhatu neshanu kuSeattle Vana Hospital.
Chinangwa chemupiro uyu chaive chechirongwa chayo cheStrong Against Cancer. Muna 2020, Wilson naCiara vakabatana neChikafu Lifeline kuti vape chikafu chemiriyoni kune avo vanoshaya panguva yedenda ra1.
Wilson muKristu akazvipira. Anotaura nezvekutenda kwake kwechiKristu pasocial media. Unoziva here kuti Wilson naCiara vakaita chitsidzo chekusaroora kusvika varoorana? Wilson akawana chitendero aine makore gumi nemana mushure mekunge Jesu auya kwaari achirota.
Anoyeuka akarota nezve baba vake vachishaya uye nekuuya kwakaita Jesu mukamuri rake ndokuudza quarterback kuti aifanira kuziva zvakawanda nezvake. Wilson akaenda kuchechi musi weSvondo, uye ave ari muKristu akazvipira kubvira.
Haisi chakavanzika Russell Wilson muvhangeri anoda mimhanzi, muKristu akazvipira. Anopfeka Nhamba 3 nekuda kweUtatu Hutsvene. Anonyanya kufarira mimhanzi mimhanzi yaKirk Franklin naLamar Campbell, vanobatana nehupenyu hwake.
Nekudaro, Wilson akasarudza nhamba yechitatu nekuti maSeahawks akamusarudza mumutambo wechitatu. Wilson akasarudza nhamba kukudza Utatu Hutsvene.
Chokwadi #4: Russell Wilson Passing Academy:
Anotambira Russell Wilson Passing Academy muoffseason, musasa wenhabvu wevechidiki mumaguta akati wandei.
Iyo Academy ikiriniki yemazuva mana yenhabvu yekuAmerica inoitwa gore rega muZhizha. Iyo inorairidza ina yakasarudzika nzvimbo: quarterback, kumhanya kumashure, yakafara inogamuchira uye yakasimba magumo.
Saizvozvo, muna 2012, vakaendesa mari kubva kumusasa kuenda kuCharles Ray III Diabetes Association, iyo Wilson ari Mumiriri wenyika.
A selfie nevadzidzi veNFL Star's Passing Academy.
Chokwadi # 5: Russell Wilson ane mucherechedzo wechiratidzo?
Ehe, Russell Wilson ane brand logo ye siginecha yake yekupfeka mutsara, 3Brand. Mune imwe yebvunzurudzo dzake, Russell akataura kuti logo yake 3BRAND inomiririra pfungwa, muviri, uye mweya.
Uyezve, Russell Wilson zvakare ane zviri pamutemo logo yake paNike. Yake logo inoratidza musanganiswa wemavara ake uye nhamba yejezi rake.
Chokwadi #6: NFL Runyerekupe:
Hurukuro dzakawanda dzinobhururuka dzinoitika muNFL. imwe yeakadai ndeye nezve Kutengesa Aaron Rodgers kuna Russell Wilson.
Kunyangwe hazvo Seattle Seahawks neGreen Bay Packers vakatsiga mukutaura kuti havana hurongwa hwekutengesa maQB avo.
NaAaron Rodgers arikuda kubuda muGreen Bay naRussell, nekuonekwa kwese, ave kusvika kumagumo ekumhanya kwake muSeattle.
Isu tinofungidzira zvingave zvine musoro kuti Seahawks GM/Packers mugovani John Schneider ape Wilson kuna Rodgers.
Chokwadi #7: Kutariswa neTV Show Entourage:
Kunze kwenhabvu ne baseball, chishuwo chikuru chaWilson chirongwa cheHBO "Entourage." Anoda show zvakanyanya. Aigona kutove nekuonekwa kwakajeka mufirimu iro rakarova theatre muna 2015.
Pamusoro pezvo, mushure mekunyorwa kunze kweWisconsin neSeattle Seahawks, Wilson akapemberera kuita kwake kunoshamisa nekuona showo.
Russell ane kuzvipira kunenge kwakawanda kushoo sezvaanoita kuhunyanzvi hwake hwemazuva ese.
Chokwadi #8: Munyori weVatambi 'Tribune:
Russell ane tarenda kunze uye kunze kwemunda. Unoziva here kuti ndiye mumwe wevapepeti vakuru kuThe Players 'Tribune?
Iyo chikuva chakatangwa muna2014 neyaimbova New York Yankees Hall-of-Fame pfupi. Iyo purojekiti inopa vatambi vane online chikuva chekubatana nevateveri.
Russell Wilson Biography pfupiso:
Sezvineiwo, kukurumidza kufenda kuburikidza naRussell Wilson Biography uye Nyaya Yehudiki, isu tave neruzivo rwese zvaungada kuziva nezvake.
Networth yake, zera, kureba, uremu, mukadzi, vana, mukoma, vabereki, hanzvadzi, hama, kusimuka mukurumbira uye nhoroondo inounganidzwa patafura pano.
Zita rizere: Russell Carrington Wilson
Zita rekudanwa: Mr. Unlimited
Zuva rekuzvarwa: 29 Mbudzi 1988
Basa: Nhabvu yeAmerica (quarterback)
NFL Dhizaini: 2012 / Round: 3 / Sarudza: 75
Tema: Seattle Seahawks
Dzidzo: Collegiate Chikoro Richmond, Virginia, North Carolina State University (2007-2010), University of
Mumwe: Ashton Meem (m. 2012-2014), Ciara Princess Wilson (m. 2016)
Baba: Harrison Benjamin Wilson III
Amai: Tammy Wilson (Née Turner)
Hanzvadzi konama: Harrison IV
Hama: Sekuru vababa (Harrison B. Wilson Jr.)
Vana: Sienna Princess Wilson (mwanasikana), Win Harrison Wilson (mwanakomana) uye Future Zahir Wilburn (mwana wokurera).
Hobbies: Mafirimu ("Entourage" (2015)), TV Shows, dzinobhururuka maherikoputa, Mhuka, Baseball, Basketball uye Beaches.
Muhoro: $ 12.5 Million
Social Media: DangerRussWilson (twitter), ngoziusswilson (instagram), hatariusswilson (snapchat).
Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuputira Russell Wilson's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya. Mushure mebasa rakabudirira kusvika zvino, munhu akagadzirira kufunga kuti ane tarenda QB akagadzirira kuita nyore. Sezvineiwo, zvakapesana ndizvo zvazviri.
Russell anoshumawo mune imwe yebvunzurudzo dzake kuti zviroto zvake hazvina kumira. Semwana mudiki, anonyora ku-ita zvinyorwa pamusoro pezvirongwa zvake. Ndaza yacho yaisanganisira zvaaida kuita muupenyu. Tarirai! Zvese zvakanyorwa zvakaitika, anodaro Wilson.
Nhasi iye nyeredzi QB uye akawana super mbiya kuhwina. Zvakadaro, kushanda kwake nesimba uye kuomerera zvakasimba kune vakasiyana-siyana vapi vezano, pamwe chete nababa vake, zvaive zvakakosha. Isu tinoveza kushivirira kwako kunyoresa kune mamwe biography chokwadi nepamusoro-notch mhando.